Chikumi 11, 2018 arun
2 guru bhazi Makambani muBrazil kugamuchira Bitcoin
Two Brazilian bhazi Makambani, Traffic Garcia uye South Brazil, kuti tiri chikamu GSB boka vachangobva akava wokutanga mutakurwi chokufambisa makambani muBrazil kubvuma cryptocurrency sezvo muripo nzira.
Pakutanga Boka akasarudza chete kushandisa Bitcoin, asi anoronga kuwedzera Litecoin kubudikidza July.
"Akavhiyiwa vakawanda zveupfumi uye vezvokutengeserana vari dzichitama kune digitaalinen nyika, uye chidimbu mugwagwa mutakurwi chokufambisa hakuna kusiyana "anodaro GSB Group mutevedzeri wapurezidhendi Estefano Boiko Junior.
Izvi chokufambisa Makambani kupa nzendo pakati pamaguta uyewo private nzendo zvikoro, makirabhu, Makambani uye excursions.
The itsva mubhadharo nzira inowanikwa kuburikidza mubhazi Makambani Website, Via paIndaneti kuchengetedza chete, uye tikiti achatumirwa mutengi imeiro semubhadharo chisimbiso.
500 000 vanhu muSwitzerland akavhotera nokuda Bitcoin akaita mari hurongwa
A Mushandirapamwe zvikuru idzokere indasitiri zvemari Switzerland kupinda chinhu chakatodzana Bitcoin kuti zvoupfumi akarasika spectacularly nezuro - nayo vakakwanisa kuhwina zvinenge 500,000 mavhoti, kumativi 25% yevakabvunzurudzwa.
The gakava urongwa - anozivikanwa Changamire Mari Initiative - ungadai wakaona yezvokutengeserana mabhanga wakakomberedzwa kubva mukombiyuta mukusika mari apo mhindu seri deposits dzavo.
“Cryptocurrency uye blockchain anotsvaka kufanana apo tiri vakananga. Zvinogona kunge kushandiswa pasi hurongwa takanga achimuudza,” akati Emma Dawnay, bhodhi nhengo MoMo, boka iro zvinganaka Changamire Money Initiative.
Digital Currency Anoenda choruzhinji pamwe DasCoin
Kraken Daily Market Mushumo 10.06.2018
$233M nhumbi mhiri misika zvose nhasi
Zvatinoziva pamusoro Cryptocurrency giremu uye Teregiramu yaienda ICO
Blockchain Observatory uye Forum Ichaunza EU kuti "Shongwe" pamusoro Blockchain Tech
EU anotangazve Blockcha ...
Bithumb hacked nokuti $...
Previous Post:Ose wechitatu German inokurukura cryptocurrencies ive mubhizimisi
Trevor Moede anoti:
Chikumi 19, 2018 pa 5:26 PM
Gunyana 4, 2018 pa 2:10 AM
Gunyana 4, 2018 pa 5:05 PM
Gunyana 5, 2018 pa 1:46 AM